Don Hilton, MD မှအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြProbleနာများဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
neuroscience နှင့် PSBs
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အကျိုးကိုစနစ်နှင့်လူ့လိင်အကြောင်းကိုမှ neuroscience ရှာဖွေတွေ့ရှိပြဿနာနှင့်ကျန်းမာနှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သစ်ကိုအလင်းကိုသွန်းပါပြီ။ မည်သည့်သစ်ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သို့သော်အချို့သံသယမှ neuroscience တောင်းဆိုမှုများကိုလည်းမီဒီယာ၌ထငျရှားပါပွီ။ တစ်ဦး neurosurgeon နှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဦးနှောက်၏အစာစားချင်စိတ် / ဆုလာဘ်ယန္တရားများအပေါ်အများအပြားစာတမ်းများ၏စာရေးဆရာအဖြစ်ငါတစ်ခါတစ်ရံထိုအနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းပြင်ပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ဤတွင်ငါတို့စာဖတ်သူတွေစိတ်ဝင်စားဖြစ်အံ့သောငှါအနည်းငယ်ဥပမာဖြစ်ကြသည်။
အမှား #1 - "Dopamine စွဲအခြေခံမထားဘူး"
dopamine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကပိုင်ထိုက်သောတောင်းဆိုမှုများထိုကဲ့သို့သော "အဖြစ်, မကြာသေးမီလများအတွင်းပေါ်ထွန်းသောပါပြီသငျသညျ porn စွဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုအငြင်းအခုံလုပ်လိုပါကသင်သည်တတ်နိုင်, သင်မူကားထိုသို့ပြုမှ dopamine အပေါ်မှီခိုနေလျှင်။ အရမ်းရယ်ရတယ်, သင်ကမှားနေ"နှင့်"dopamine တစ်ခုစွဲလမ်းကြိုး neurochemical တောင်းဆိုရပ်တန့်ပေးပါ။ "
Dopamine ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝြဖစ်စဉ်များတွင်အများအပြားညင်သာပျော့ပျောင်းအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်။ သို့သော်စွဲသို့မဟုတ် neuroscience ၏နယ်ပယ်များတွင်အားလုံးကျွမ်းကျင်သူများကစွဲအတွက် dopamine ၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍအသိအမှတျပွု။
တကယ်တော့စွဲလမ်းတစ်ခုစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုတုံ့ပြန် dopamine မြင့်မားပေမယ့်အကျဉ်းချုပ်, burst မပါဘဲဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူများက Volkow နှင့် Koob တစ်ဦးအတွက်ကရှင်းပြသည်အဖြစ် မကြာသေးမီစက္ကူဤ dopamine ထို့နောက်ဒါခေါ် Pavlovian သင်ယူမှုဖြစ်ပေါ်သည့်ဆဲလ်အဲဒီ receptor အဆငျ့မှာဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုထုတ်ယူ surges ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူချောမွေ့သောမော်လီကျူးယန္တရားများ အလားတူပေါ်လာ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ပုံစံအားလုံးကိုအဘို့။ (ဥပမာ, porn ကြည့်ရှု) ဆုလာဘ်များထပ်ခါတစ်လဲလဲအတွေ့အကြုံများကိုသူတို့ကိုအရင်အဦးနေရာသောအသုံးပြုသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်ဖြစ်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ, တူညီတဲ့ဆုလာဘ် (ဒီဥပမာထဲမှာ, porn) ကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်, dopamine ဆဲလ်တွေအတွက်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ခတ်လေ့ တင်ကူးသိမြင်မှု အမှန်တကယ်ကြည့်နှင့် တွဲဖက်. ကြည့်ရှုမယ့်အစားများ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းကို အသုံးပြု. နှင့်မျှော်လင့်နေတဲ့ကိုကင်းအလေ့အထဆိုနဲ့မတူဘဲအတွက် interwoven ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်ပေမယ့်။ မဆိုစွဲကဲ့သို့သောတစ်ဦးတည်းနေတဲ့ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်မယ့်အမည်, အချိန်ကြားနာအဖြစ်, တွေကိုနှင့်အစပျိုးဖွံ့ဖြိုး, ဒါမှမဟုတ်အတိတ်အသုံးပြုမှု (စသည်တို့ကိုပျင်း, ငြင်းပယ်ခံရ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်,) နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏အခြေအနေများ, ရုတ်တရက်အပွောငျးအလဲထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအပွောငျးအလဲပြီးတော့ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ပင်မူးရူးဖို့မတရားသောဖြစ်ပေါ်။ ထိုသို့သော conditional တုံ့ပြန်မှုနက်ရှိုင်းစွာအရိုးစွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးက porn ကို အသုံးပြု. မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်ပင်ရှည်လျားပြီးနောက်ခိုင်မာတဲ့မတရားသောအပေါ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
dopamine ကို“ ပျော်စရာမော်လီကျူး” ဟုတစ်ခါတစ်ရံစဉ်းစားသော်လည်း၎င်းသည်နည်းပညာအရမှားယွင်းသည်။ Dopamine drives တွေကို ရှာကြံနှင့်ရှာဖွေနေ အကျိုးသည် - ထိုမျှော်လင့်ခြင်း, ချို့တဲ့။ တချို့ကံဆိုးသောလူ, ဒီရှာအဖြစ်လူသိများသည့်ရောဂါသို့ ပို. ရငျ့ စှဲမွဲမှု။ မွတ်မပြေနိုင်သောအဘို့အအသုံးပြုသူရဲ့အပူတပြင်းရှာဖွေရေး (နောက်ဆုံးမှာမကြာခဏခဏသို့မဟုတ်ချက်များမရရှိသထေူကြောင်း) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစု, လူမှုရေး, ပညာရေး, လုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကအခြားအရေးကြီးသောဒေသများရှိသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်း၏အချက်မှဖြစ်စဉ်များ။
သို့သျောလညျး, စွဲယခုဤအမူအကျင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်သာသတ်မှတ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုစနစ်တကျမရှိသောဆုလာဘ်လေ့လာမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ပိုမိုတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အဖြစ် Kauer နှင့် Malenka "စွဲသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါဗေဒပေမယ့်အစွမ်းထက်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ " ဟုပြောသည်ဘာဖြစ်လို့စွဲဆေးပညာ၏ American Society (ASAM) ဤဖြစ်ပါသည် redefined စွဲ တ္ထုများနှင့်အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးအပါအဝင်အဖြစ်။ ASAM ရဲ့အနေအထားကိုမာ့ခ် Lewis ကတစ်ဦးကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုကားမောင်းအတွက်ဦးနှောက်ရဲ့အလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုမှုက "မြိုင်, ခိုင်မာစေခြင်းနှင့် indelible ဖြစ်လာသည့်အာရုံကြောဇာတိပကတိ၌ခြေရာ, တစ်လိုင်းကို။ " (Lewis က, တစ်ခုစွဲဦးနှောက်၏ကိုယျတှေ့မှတျတမျး, 2011) ။
အမှား #2 - "တစ်ဦးနှောက်အဆင့်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှာခွေးပေါက်စနှင့်အတူကစားခြင်းကနေမျှကွဲပြားခြားနားသည်"
ခွေးပေါက်စနှင့်အတူကစားခြင်းအကျိုးကိုစနစ် (သင်တစ်ဦးကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်လျှင်) ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ, နေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သော activation အားလုံးသဘာဝကဆုလာဘ်အာရုံကြော equivalents သောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံမပေးပါဘူး။ ပထမဦးစွာလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်ကိုအခြားသဘာဝကဆုလာဘ်ထက် dopamine နဲ့ endogenous opioids ၏ဝေးအဆင့်မြင့်သွေးဆောင်။ ကြွက်လေ့လာမှုများလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေသည့် dopamine အဆင့်ဆင့်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့အားတူညီကြောင်းထုတ်ဖေါ်။
ကတိကျစွာအဆိုပါမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထလည်းထူးခြားသည် တူညီတဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ကအာရုံကြောဆဲလ် စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း အာရုံကြောဆဲလ် activation ၏စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်ရေအဖြစ်ကသဘာဝဆုလာဘ်များအကြားထပ်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သုတေသီများကလည်း (အစားအစာ၏သဘာဝဆုလာဘ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် Synaptic plasticity အတွက်တူညီမြဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေတော်မမူကြောင်းငါမြဲချန် et al ။ , 2008).
သို့သော်ဤ gustatory ဆုလာဘ်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းပြောသည်မဟုတ် စွဲလမ်းဖြစ်လာ သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီမှနှောင့်အယှက်များနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, သို့မဟုတ်အကြောင်းမရှိ precipitate ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။ မဆိုသမားအဝလွန်ခြင်းဆေးဝါးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဘီလီယံစားသုံးတဲ့ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီး, သိတယ် ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာအတွက် dopamine အဲဒီ receptor တွေပျက်စီးမှု Gastric banding ကိုခွဲစိတ်အပြီးကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုပုံမှန်သိပ်သည်းဆမှပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ဒါ့အပြင်ဆားကွယ်ပျောက်သွား / တှေအမြားကွီးနှင့်အတူ evoked သောတဏှာပြည်နယ်များအတွက်အရေးကြီးသောဆုလာဘ်စနစ်ကပရိုတိန်းထုတ်လုပ်ရန်သော DNA ကိုမှတ်တမ်းရှိပါတယ် မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူတို့အားတူညီ (Leidke et al ။ , 2011, PNAS) ။ က National Geographic ဒီစက္ကူပေါ်မှာဆောင်းပါးမူးယစ်ဆေးဝါးများအဆိုပါသဘာဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း "hijack", ဤလူအပေါင်းတို့စွဲများအတွက်မှန်, ဖဲချပ်ဝေ, porn, ဒါမှမဟုတ်ပေါက်ပေါက်ဖို့ရှိမရှိကဆိုသည်။
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသာ hijack အတိအကျအာရုံကြောဆဲလ် လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်း activated, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအလိုရှိကြသည်တွင်အောင်ပြောင်းလဲသောတူညီသင်ယူမှုယန္တရားများ-ရွေးချယ်ပူးတွဲ။ လိင်စိတ်နိုးထနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်မှုစေတူညီတဲ့အာရုံကြောဆဲလ် activation meth, ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူဒီတော့စွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြကူညီပေးသည်။ ဒါ့အပြင်နှစ်ဦးစလုံး လိင် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ဖြစ်ကြောင်း neuroplastic ပွောငျးလဲမှု, ကူးယူအချက် DeltaFosB သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှစ်ဦးစလုံးနီးပါးတူညီ နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အသုံးပြုမှု.
, အသေးစိတျမျိုးစုံယာယီအာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ elucidate ဖို့ဝေးလွန်းရှုပ်ထွေးနေစဉ် အော်ဂဇင်နှင့်အတူပေါ်ပေါက် အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။ ဤရွေ့ကားလျော့နည်းသွားဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များပါဝင်သည်, hypothalamic enkephalins တိုးလာနှင့် prolactin တိုးတက် estrogen receptor တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတ်ရည်လွှတ်ဆုလာဘ်စနစ်ကအာရုံကြောဆဲလ် (ထို ventral tegmental ဧရိယာ, ဒါမှမဟုတ် VTA) ရက်နေ့တွင်နာတာရှည်ဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတုယူ။ အထူး သုတ်ရည်လွှတ်ယာယီအာရုံကြောဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်အတူတူ dopamine ကျုံ့ သောဆုလာဘ်စင်တာ (နျူကလိယ accumbens) တွင် dopamine ၏ယာယီဆင်း-စည်းမျဉ်းမှဦးဆောင်နာတာရှည်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကျုံ့။
တစ်ဦးက 2000 fMRI လေ့လာမှု ညစ်ညမ်းခဲ့တစျခုအရာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအဆုလာဘ်, သုံးပြီးဦးနှောက်ကို Activation နှိုင်းယှဉ်။ ကိုကင်းစွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု: 1) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, 2) ပြင်ပသဘာဝမြင်ကွင်းများနှင့် 3) အက်ကွဲကင်းဆေးလိပ်တစ်ဦးချင်းစီ။ ရလဒ်: သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ် porn နှင့်ကြည့်တွေကိုကြည့်ရှုသည့်အခါကင်းစွဲနီးပါးတူညီဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့ပါတယ်။ porn များအတွက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ (သို့သော်ကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံး porn များအတွက်တူညီသောဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့။ ) သို့သော်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများသဘာဝမြင်ကွင်းများကြည့်ရှုသည့်အခါပုံစံများအနေဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်။ တိုတိုမှာတော့ရှိပါတယ် မျိုးစုံဇီဝအကြောင်းရင်းများ ခွေးပေါက်စတွေနဲ့ကစားတာ၊ သန်းနှင့်ချီသောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်အင်တာနက်ပေါ်မှခွေးများကိုကြည့်ရုံမျှမကကြော်ငြာဝင်ငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာရရှိရန်သင်သည် PuppyHub မဟုတ်သော“ Pornhub” ဆိုသည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသိသည်။
အမှား #3 - "ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်း၏ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတိတ်ကာလ၏အငြိမ် porn ထက်မကွဲပြားကြသည်"
ဤအရေးဆိုမှုကိုအားလုံး porn ညီတူညီမျှအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းဆိုလို။ သို့သော်မကြာသေးမီစက္ကူအဖြစ် ပန်းခြံ et al., 2016 ထောက်ပြ, သုတေသနကိုဗီဒီယိုညစ်ညမ်းသိသိသာသာပိုပြီးလိင်နှိုးဆွသောညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများကိုထက်ကြောင်းပြသသည်။ (ကျနော်သေး VR porn မသုတေသနလုပ်ငန်းများသိကြ။ ) အပြင်, Self-select လုပ်ပါပစ္စည်းနိုင်စွမ်း Pre-မရွေး collection များကိုထက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပိုပြီး arousal စေသည်။ ယနေ့ porn အသုံးပြုသူကိုလည်းဝတ္ထုမြင်ကွင်းတစ်ခု, ဗွီဒီယိုအသစ်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့အမျိုးအစားမှနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်အရှိန်မြင့်နိုင်ပါတယ်။ novel လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ယောင် သာ. ကြီးမြတ် arousal, ပိုမိုမြန်ဆန်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, အကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းထက်ပိုပြီးသုတ်ရည်များနှင့်စိုက်ထူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်။
ထို့ကြောင့်ယနေ့ဒစ်ဂျစ်တယ် porn ၎င်း၏အဆမဲ့အသစ်အဆန်း, အစွမ်းထက်ပေးပို့ (Hi-def ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ကို virtual) နှင့်သုံးစွဲသူကိုပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်းမှအရှိန်မြင့်လာတယ်နိုင်သည့်နှင့်အတူလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ "ဟုဖွဲ့စည်းပုံsupranormal လှုံ့ဆော်မှု။ "နိုဘယ်ဆုရှင် Nikolaas Tinbergen ခြင်းဖြင့်စတင်သုံးစွဲဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများ, တစ်မျိုးစိတ်ကြောင့်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် salience မှလိုက်စားရန်ပြောင်းလဲထားပါတယ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပုံကြီးချဲ့အတုကိုရည်ညွှန်းပေမယ့်တုပယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုထက် neurochemical တုံ့ပြန်မှု (dopamine) ၏ပိုပြီးကျလာသောနိုင်သည့် ။
Tinbergen မူလကငှက်, လိပ်ပြာနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များအထူးသတိရစ္ဆာန်ရဲ့သာမန်ကြက်ဥနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုပေါ်လာဖို့ဒီဇိုင်းအတုအစားထိုးပိုနှစ်သက်သို့ duped နိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Tinbergen နှင့် Magnus ရဲ့ '' လိပ်ပြာ porn '' ကိုအောင်မြင်စွာအစစ်အမှန်အမျိုးသမီး၏ကုန်ကျစရိတ် (မှာအထီးအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်အဖြစ်Magnus, 1958; Tinbergen, 1951), ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ porn ကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအသုံးပြုသူများသည် '' အာရုံကိုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၎င်း၏တန်ခိုး၌ထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှားသုံးခုသည်လူ့စိတ်ဆန္ဒ၊ အပြုအမူနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့တွင် ဦး နှောက်၏အဓိကအခန်းကဏ္ignကိုလျစ်လျူရှုရန်စိုးရိမ်သောဝေဖန်သုံးသပ်သူများ၏ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ လိင်ပညာရှင်တစ် ဦး က“ ဦး နှောက်သိပ္ပံနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှိတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဇီဝဗေဒပညာကိုသင်ယူသူများသည်လူ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် ဦး နှောက်၏အဓိကအခန်းကဏ္increasinglyကိုပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မည်။ အမှန်မှာလိင်အင်္ဂါပညာရှင်များနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်နှစ် ဦး စလုံးသည်လိင်အင်္ဂါသည်မူလလိင်အင်္ဂါ ဦး နှောက်မှ၎င်းတို့၏အမိန့်ကိုယူကြောင်းနားလည်သင့်သည်။
Donald L. ဟီလ်တန် Jr, MD FACS, FAANS San Antonio တွင်မှာတက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာ, ကျောရိုးမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့်မက်သဒစ်ဆေးရုံလည်ပတ်မှာ neurosurgical သင်တန်း၏ဒါရိုက်တာ၏ဒါရိုက်တာမှာ neurosurgery တစ်ခုတွဲဖက်တွဲဖက်ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူမြောက်မြားစွာဆောင်းပါးများရေးသားများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ neurobiology အပေါ်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ပြောတတ်ခဲ့သည်။
ခါးပန်း ON ORIGINAL ဆောင်းပါး LINK